Senatorada Haweenka ah ee Aqalka Sare oo maanta Guddoomiye dooranaya – Kalfadhi
Senatorada Haweenka ah ee Aqalka Sare oo maanta Guddoomiye dooranaya
Xubnaha Haweenka ah eek u jira Xildhibaanada Aqalka Sare ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa lagu wadaa in maanta magaalada Muqdisho ku doortaan Guddoomiye sida ay sheegeyn guddiga qaban qaabada doorashada.
Senatorada ah Haweenka ah ee ku jira Aqalka Sare ayaa dhowaan sameestay Urur Haween ah oo ay ku mideysan yihiin Senatoraa Aqalka Sare waxayna maanta u diyaar garoobeen in ay maanta doortaan Guddoomiye ku xigeenkiisa.
Munaasabadda doorashada ayaa ka dhacay Xarunta fadhiyada Baarlamaanka Aqalka Sare waxaana lagu casuumay dhamaan Senatorada Aqalka Sare, Xildhibaanada Haweenka ee Golaha Shacabka iyo marti sharaf kale.
“Guddiga qabanqabada doorashada Ururka Haweenka Barlamaanka Aqalka Sare (CUACUS)-Ka waxaa ay ku casuumayaan Dhammaan Senatarada Golaha Aqalka Sare in ay ka soo qeeyb galaan doorashada guddoonka CUACUS-Ka Haweenka Golaha Aqalka Sare-BFS oo dhacayso maalinta bari ah” ayuu lagu yiri qoraal ka soo baxay Guddiga doorashada Guddoonka Haweenka Aqalka Sare.
Xildhibaanada Haweenka ah ee ku jira Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa sidaan oo kale hore u sameestay Urur Haween oo leh Guddoomiye iyo mas’uuliyiintii kale ee loo baahnaa.
Xubnaha Haweenka ah ee katirsan labada Gole ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa wada is baheysi siyaasadeed si ay uga soo dhaxmuuqdaan Siyaasadda Soomaaliya islamarkaana ay u raadiyaan saamniga siyaasadeed ee Haweenka Soomaaliyeed sida lagu sheegay Shir ay sanadkii hore ku yeesheen magaalada Muqdisho Xildhibaanada Haweenka ah ee Baarlamaanka Soomaaliya.
Guddoomiyaha Golaha Shacabka oo u yeeray Wasiirada Amniga, Gaashaandhigga iyo Taliyaasha Ciidamada
Ururka Haweenka ee baarlamaanka Aqalka Sare oo doortay Guddoomiye iyo ku xigeeno